Prince Iwuoha, Author at ElombahNews
Prince Iwuoha7 posts 0 comments
Prince Iwuoha	 Nov 10, 2020
Okwu dara uda na akwukwo nta akuko ubochi uka bu abali asato na onwa iri na otu na afo puku iri abuo na iri abuo Genu nti ka unu nu ihe gbara okpuru na akwukwo mgbasa ozi. Onye wetara unu nke a bu iwuoha princeNATION NEWSPAPERMazi…
Prince Iwuoha	 Nov 8, 2020
Okwu kpara ọkpụrụkpụ na akwụkwọ mgbasa ozi nke abalị ise na onwa iri na otu nime afọ puku abụọ na iri abuo Genu ntị ka unu nụ ihe akwụkwọ nta akụkọ ndị a na àgwà unu.Ode akwụkwọ bụ Iwuoha prince:THE NATIONOnye isi ala…
[Igbo Corner] Okwu ntabire ~ sitere na ọnụ Iwuoha Prince
Prince Iwuoha	 Nov 6, 2020
Dịka aha ya si dị, okwu ntabi ire bụ okwu nyiri ibe ha ana ekwu ngwa ngwaỌ dịghị nfe okwu kwụ. Ona enye onye na ekwu ya na onye na ege ntị anuriỌbụ otu na ụzọ Igbo si eme onwe ha obi utoGenu ntị na okwu aỌkụkọ okwa akwa yiri…
[Igbo Corner] Ụbọchị pụrụ iche na Ala Igbo
Prince Iwuoha	 Nov 5, 2020
Na ala Igbo, anyị nwere afọ, nkwo, orie na eke. Ụbọchị ọzọ pụrụ iche bụ abalị anọ na onwa iri na otu.Oké ụbọchị a na abịa naanị otu mgbe na afo. Ihe mere ụbọchị a ji bụrụ akacha nma bụ maka na ọbụ ụbọchị amuru nwa Igbo na enweghị o…
Ndigbo na eji anụmanụ na akọwa omume ndi mmadụ. Igbo ma ka esi eji anụ ọhịa na anụ ụlọ kowa otu mmadụ si akpa agwaGe ntị ka ịnụ anụmanụ Igbo ji akọwa mmadụÉzì :, igbo na eji ezi akọwa mmadụ na eru unyi. Asina mmadụ bụ ezi, ihe ọ…
Ilu Igbo nke taa sitere na ọnụ Iwuoha princeIbụ onye Igbo? Ilu ole ka ịma? Ịma na Igbo nwere ilu maka ọnọdụ ọbụla? Ka anyị leba anya na ilu Igbo ji agwa mmadụ ka ọ kwado nke oma tupu obido ime ihe ọ chọrọ imeNke mbụ, Okoro etoghi…
Iwu Igbo Iwuoha prince na e wetara unuIke anaghị agwụ ụmụ Igbo na ịtụ ilu, dịka anyị na atụ ilu bụ ka agụụ ịtụ ilu na agụ anyị. Anyị na eri ilu Igbo dịka nri. Dịka akpịrị na akpọ nne ele nkụ mgbe anụghị mmiri, otu a ka akpịrị na akpọ m…